Etu ị ga-esi họrọ ihe ngbawa ahịa akpaaka | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa nwere ike ịnwe nhọrọ kachasị dị na oge a, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-abanye n'ime oghere akpaaka iji mee ka ndụ na ọrụ dịrị mfe. N'ime ụwa dị iche iche, anyị enweghị ike ijikwa ihe niile yana nke ahụ pụtakwara ọrụ nchịkwa dị mfe nke gụrụ 20% nke ụbọchị anyị.
Ihe omuma atu nke otu n'ime ulo oru ndi n'eme ka ha banye n'ime oghere di n'ime ahia; doro anya, Salesforce.com abụwo nnukwu ọkpụkpọ ogologo oge, mana ngwa ndị ọzọ, ma e wezụga CRM, na-abịa n'ìhè ma na-anwa ịghọ azịza SaaS maka otu ndị ahịa. Ebumnuche nke azịza ndị a abụghị naanị iji rụọ ọrụ na-achịkwa ọrụ nchịkwa, mana emebere ha iji nye gị ezigbo ọka nchịkọta nke nwere ike inye ọgụgụ isi azụmahịa ahịa (SBI) n'ime:
Mgbe atụmanya ahụ mezuru.
Kedu ka atụmanya ahụ siri dị.
Kedu ụzọ na usoro ga-arụ ọrụ iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Onye ahịa anyị na onye nkwado anyị, bụ Salesvue, bụ n'ezie otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na-ere ahịa akpaaka ahịa, ma ha aga n'ihu na-enyere ndị ahịa ha aka ime ka ndị ahịa ha na-arụ ọrụ nke ọma. Site na ọrụ nchịkwa na ihe ncheta, sọftụwia ha na-eme ka ọ dị mfe maka otu ndị na-ere ahịa ka ha lekwasị anya n'ire kama ịjupụta CRM ha.
Dị ka otu n'ime ihe mbụ ahịa akpaaka ngwọta, ha mepụtara ihe infographic na Otu esi choputa Ahịa akpaaka Ngwọta, na-enye ndepụta zuru ezu nke ihe ị ga-atụle mgbe ị na-achọ ịchọta ihe ngwọta SaaS kwesịrị ekwesị maka otu gị.
You na-eji ahịa ahịa akpaaka ugbu a? Ọ bụrụ otu, olee nke? Kesaa echiche ma ọ bụ ahụmịhe gị na ngalaba nke dị n'okpuru. Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịmụtakwu banyere Salesvue, pịa n’okpuru:
Gaa Leta Salesvue
Tags: content Marketingahịa ọgụgụ isiInfographics Ahịaakpaaka ahịaọgụgụ isi azụmahịa ahịaọdịnaya ahịaNkwado ire ahịaahịa infographicahịa infographicsSBI
Jul 15, 2014 na 10: 03 AM
Nnukwu ihe ọmụma - amaghị m etu esi ere ahịa na ịrị elu!